Calaamadeeyaha Sameeyaha wuxuu leeyahay Bulsho foosto hoosteed - Biyaha Laan badan, Fadlan! | Martech Zone
Khamiista, Febraayo 21, 2013 Axad, Oktoobar 4, 2015 Marty Thompson
Waxaan dhawaan ka aqriyay boostada at Kaniisada Macaamiisha, oo ay qoreen Jackie Huba iyo Ben McConnell (laba ka mid ah dadka ugu caqliga badan ganacsigan), kuna saabsan hoopla Marker Mark. Calaamadeeyaha Sameeyaha ayaa ah hal sumad oo hoostaga dalladda Qoyska dogob ee alaabada.
Xitaa saaxiibkeen oo ku sugan Raidious, Dodge Lile, ayaa la soo galay indho indheyn xoog leh. Waxay u muuqataa in Mark Sameeyaha Mark uu go'aansaday inuu milo badeecadooda si uu u kala bixiyo tiradda socota, isla markaana uu ula kulmo baahida sii kordheysa. Dib-u-dhacii ku yimid calaamadda Sameeyaha ee Mark ayaa ku dhacday iyada oo la wadaagayo go'aankan bogooda, iyo kanaalada bulshada ayaa ahaa, si fiican, waxay u oggolaanaysaa inaan dhaho waxaan cabi lahaa bourbon badan beryahan haddii aan ahaan lahaa Rob ama Bill Samuels.
Faallooyinka badankood ayaan aqriyay, Naadiga Bulshada ee Mark Maker waxaa hadda lagu muujiyey inuu yahay badbaadiye, saxeexa koorsada xaqa ah, ama kanaalada lagu xirayo go'aamada xun ee aan lagu talagalin. Laakiin waxaan hayaa dhowr faallooyin dheeraad ah, fiiro gaar ah, iyo talooyin. Calaamadeeyaha Sameeyaha ayaa runtii u yimid xaqiiqda inay jiraan noocyo, ka dibna ay jiraan noocyada.
Qaar badan oo ka mid ah badeecadaha ku jira faylalka sheyga ee Beam ayaa hubaal ah inaysan hoos imaan doonin baaritaanka noocaas ah ee qaabeynta ay khuseyso. Laakiin ka warran Laphroaig? Ardmore? Courvoisier? Kuwani oo dhan sidoo kale waa sumado Beam. Kama fikiri karo wax sii hurinaya, go'aan fudud oo maskaxeed intii aan ku mashquuli lahaa alaabooyinka istaagay tijaabada waqtiga. Laakiin sug, suuqa miyaa laga warqabaa isbeddelada ku yimid badeecadan sannadihii la soo dhaafay? Ma isbedelbaa la sameeyay iyadoo aan la ogeysiin macaamilka? Waan ka shakisanahay.
Ujeeddadaydu waa tan. Mar alla markii aad yeelato sumad, wax soo saar, oo aad adigu adeeg bixiye ahaan u fahamsan tahay inay ku dhowdahay mid muqaddas ah, miyaad ku samaynaysaa isbeddello muhiim ah, adigoon wax macaamil iyo macaamil ka helin macaamiisha? Badeecooyinka waaweyn badankood waxay lahaan doonaan daacad kadib muddo dheer kadib markay fuliyaasha suuqgeynta iyo ciidamadooda shinnida shaqaaluhu udhaqaaqaan noocyo cusub, shirkado cusub. Tani waa halka noocyo badan ay ku fashilmaan sida ay ugu wajahaan isticmaalka warbaahinta bulshada.
Waxay eegaan baraha bulshada sida kaliya kanaal kale, iyada oo aan la dhisin beel ka mid ah u doodayaasha astaanta si ay si dhow ula shaqeeyaan astaanta. Si fudud kuma sameyn kartid tan Twitter iyo Facebook oo keliya, oo waxaad dhisi kartaa xiriir waara oo faa'iido leh. Xaqiiqdii, barnaamijyadan bulshada waxaa loo isticmaali karaa marinno isgaarsiineed oo loogu talagalay bulshada, laakiin waa muhiim in la dhiso bog adag, koox diiradda saarta haddii aad rabto, oo tanna u isticmaal goobta isdhexgalka. Tani miyay la mid tahay isku soo uruurinta dadka? Ka fog Sumaddaadu waxay leedahay fikrad yar oo ku saabsan cidda ku dhex jirta, iyo midabbada ay xidhan yihiin.
Dhibaatada Bourbon ayaa sidoo kale tilmaamaysa mid ka mid ah xaqiiqooyinka cusub ee muhiimka ah ee suuqgeynta qarniga 21aad. Suuqgeyntu kuma jirto meel bannaan, oo laga soocay hoolalka maaraynta wax soo saarka, taageerada macaamiisha, iyo qaybta fulinta. Waa inay si dhow ula socotaa go'aamada muhiimka ah ee saameynaya sumadda, meel kasta oo sumaddu ay macaamil la sameyneyso macaamiisha. Tani waa ballanqaadka dhabta ah ee sida bulshada loo adeegsan karo iyo loo isticmaali karo, maadaama caqabadihii horay u jiray ay hadda yihiin kuwo aan khusayn. Si kastaba ha noqotee, waa in aynaan u eegin dhammaan waxyaabaha bulshada sida darawalka ka dambeeya dadaalkan. Iyo in si kale loo sameeyo waxay noqoneysaa falcelin heer sare ah oo ka socota fagaaraha adduun bulsho. Mark Maker ayaa macno ahaan lagu qasbay inuu galo gees, waxayna ku dhejisay kooxda suuqgeynta Beam meel u muuqata inay ka soo horjeeddo lambarkooda suuqgeynta.
Xayeysiinta iyo suuqgeynta waa inay: Kaliya muuji macluumaad run ah oo ku saabsan awoodda aalkolada oo ha ku nuuxnuuxsan awoodda aalkolada inay tahay astaamo wanaagsan oo astaanta ah. ” Xeerka Suuqgeynta Beam.
Haddii aad tahay Calaamadeeyaha Sameeyaha, ama summad kasta, waqti qaado, oo dadaal u samee sidii aad xoog ugu qaban lahayd daaha gadaashiisa, ka hor intaadan ku tiirsanaan aagga bulshada si aad u xalliso dhibaatooyinkaaga oo dhan. Oo si masuuliyad leh u caba.
Tags: dogobsuuqgeynta dogobbrandbrandingekspertenbeeshajimm beamcalaamadeeyayaashawarbaahinta bulshada
Febraayo 22, 2013 saacadu markay tahay 2: 41 AM
Waan helay sababta ay u doonayeen inay isbedelka u sameeyaan, laakiin waxay ahayd go'aan xun bilowgii. Markii aan ku maqlay warka waxaan ku qoslay xaaskeyga oo ku iri "Haa taasi si fiican ugama shaqeyn doonto." oo eeg .. may ahayn.
Febraayo 22, 2013 saacadu markay tahay 10: 59 AM